AMAGAMA OKUCHEBA IINWELE ZAMADODA-IINDIDI ZEENWELE (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Amagama okucheba iinwele zamadoda-Iindidi zeenwele
Eyona Iinwele Zamadoda Amagama okucheba iinwele zamadoda-Iindidi zeenwele
Ukwazi amagama eentlobo ezahlukeneyo zokucheba kwamadoda kubaluleke kakhulu xa undwendwela indawo yokucheba iinwele kwaye ubuza umchebi wakho ngenwele ethile. Ngapha koko, andikwazi…
Ukwazi amagama eentlobo ezahlukeneyo zokucheba kwamadoda kubaluleke kakhulu xa undwendwela indawo yokucheba iinwele kwaye ubuza umchebi wakho ngenwele ethile. Ngapha koko, ukungabinakho ukuthetha nomchebi wakho kwaye ubuze iinwele ozifunayo sesona sizathu siqhelekileyo sokuba abafana basikwe kakubi. Ngethamsanqa, ukufunda isigama sokucheba kunye nawo onke amagama amatsha okucheba iinwele yinto elula.
Ukusuka ekupheleni okanye ekucutheni emacaleni ukuya kwisikhwama, ikama ngaphezulu, i-fohawk, okanye isityalo esimilisiweyo ngaphezulu, wonke umntu onethuba isitayile sezona zinwele zipholileyo . Ngokuphanda ngamagama ahlukeneyo kunye neentlobo zokucheba iinwele zamadoda, abafana banokuqinisekisa ukuba bakhetha kwezona zisikiweyo kunye nezitayile zonyaka. Kwesi sikhokelo, siza kukubonisa imizekelo yazo zonke iinwele zamadoda kunye neenwele.
1Iindidi zeenwele zeeNwele zamadoda
MbiniTaper kunye Fade
2.1Ukuphela vs Taper
Shumi elinanyeCofa umva
Shumi elinantlanuIsityalo esiTyiweyo saseFransi
Amashumi amabiniIndlela yokucela ukucheba iinwele
amashumi amabini ananyeUkuphola kweenwele zamadoda amatsha ukuzama
21.1+ - + -
21.2Isicatshulwa seTrafti yala maxesha + yokuPhela okuPhantsi + kulayini ophezulu
21.3Ukuqhawulwa kwe-Undercut + engaxhunyiwe kwi-Textured Brush Up
21.4I-Razor High Fade + Imilo ePhakamileyo + yeenwele eziQinisekisiweyo
21.5Ukuqhuma kweFade Mohawk + iindevu
21.6I-Mid Drop Fade + i-Edge Up + ye-Messy ephezulu ephezulu
21.7Ukulahla okuPhakamileyo + kweMigca emi-3 yoyilo + lweenwele ezimfutshane
21.8Ukuphakama okuphezulu kweBald + Line Up + Uyilo loMnqamlezo
21.9Ikama Ngaphezulu kokuphela + kweCandelo eliLukhuni + kuMgca oPhezulu + kwiindevu
21.10I-Natural Slick Back Undercut
21.11Mid Fade + Long Fringe + iindevu
21.12Iinwele ezijiyileyo eziPhezulu + Phezulu koLusu luphele + iindevu ezipheleleyo
21.13Amacala achetyiweyo + Quiff Quiff + Beard
Iindidi zeenwele zeeNwele zamadoda
Kukho iintlobo ngeentlobo zexesha elide kwaye iinwele ezimfutshane iyafumaneka kumntu wanamhlanje. Ngelixa iintlobo ezininzi zeenwele kunye namagama zinokubonakala ngathi zincinci, imifanekiso kunye neenkcazo ziya kukunceda uqonde ukuba ngamnye umele ntoni.
Taper kunye Fade
Ukuphela kweenwele, okwaziwa ngamanye amaxesha njenge-taper, yeyona ndlela ithandwayo yokusika iinwele zomfana emacaleni nasemva. Njengoko igama lisitsho, i iinwele eziphelile zamadoda kubandakanya ukucheba okusondeleyo kunye neziqhiki zeenwele emazantsi entloko, ngokuthe ngcembe ukudibanisa neenwele ezingaphezulu.
Uhlobo lwe-taper fade olufumanayo luxhomekeka kwizinto ezimbini-apho uqala khona ukuphela kunye nendlela emfutshane ofuna ukuhamba ngayo. Umzekelo, unokukhetha ukusuka kweliphantsi, eliphakathi, eliphakamileyo okanye elomileyo ulusu.
Indlela efutshane ngayo iinwele zakho zixhomekeke kukhuseleko lomlindi. Kulapho ukwazi khona iinombolo ezahlukileyo zokucheba iinwele kunye nobukhulu beclipper ingaluncedo. Umzekelo, inombolo yesi-2 yokuphela imfutshane kunenombolo yesi-3 yokuphela.
Ukuphela vs Taper
Ngelixa uninzi lweendawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela zisebenzisa amagama aphelayo kunye netaper ngokufanayo, kukho ubuchwepheshe umahluko phakathi kokusikwa. Umahluko phakathi kokuphela kokucheba kweenwele kunye nokuthamba kukuba ukuphela kuyaxubana ngokubanzi kulusu, ngelixa i-taper ayinyanzelekanga ukuba isikwe ngokufutshane.
Njengoko ubona, iintlobo ezahlukeneyo zokuphela zinokudideka kubaqalayo, ke esi sishwankathelo sikhawulezayo siyakuvumela ukuba uchonge ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi into ephunguliweyo oyifunayo. Ukuba umchebi wakho ubonakala edidekile xa ucela ukuphela, tshintsha nje igama elithi taper - uninzi lweenwele ziya kwazi enye yezi zimbini.
Inkqubo ye- ukuphela okuphantsi lolona hlobo luthandwayo lwetaper, kwaye ihlala ibandakanya ithontsi elisonga endlebeni lize lihle entanyeni. Ukucheba iinwele okuphantsi kufuna ukonyuka okungangqalanga kubude, obuqala kanye ngaphezulu kwendlebe, kwaye ngokuthe ngcembe kuxubeke kwiinwele phezu kwentloko. Sincoma kakhulu ukufota okuphantsi kweengcali zeshishini ezifuna ukusikwa okukhuselekileyo kodwa okunesitayile.
Ukuphela okuphakathi kuphakathi kunika ukubonakala okufanayo nokuncipha okuphantsi, kodwa kuqala embindini wamacala. Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba kukuphela okuphakathi, oku kunqunyulwa kumgca ophakathi phakathi kwe-taper ephantsi kunye nokuchasana okuqinileyo. Ukuba ujonga ukunqunyulwa okusendlwini, oku kunokuba kokhetho lwakho.
Ukuphela okuphezulu kunokuba yeyona nto ilungileyo yokucheba iinwele kubafana abafuna i amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu . Njengoko iqala ukuphakama entloko, iinwele ziqala ukuba mfutshane zijikeleze iitempile okanye ibunzi, ngokufana ukuphela kwetempile . Ekugqibeleni, inwele ephezulu yokuphela inika umahluko omkhulu kwaye yeyona imfutshane yokuphela.
UKUYA ulusu luyaphela iqala ukusheva iyonke, ingenanwele konke konke, kwaye ngokuthe ngcembe iphela inwele lwentloko ephezulu. Ngamanye amaxesha eyaziwa njenge-razor okanye i-bald fade, le ndlela imfutshane emacaleni nasemva ibonelela ngokugqibelela okucocekileyo ngokungafaniyo kwaphela. Kuxhomekeka ekubeni ufumana ulusu oluphantsi okanye ulusu oluphezulu lukhanye, oku kujongeka kunokuba yinto eyoyikekayo kwaye eyoyikisayo.
Sisiphi isitayile esinciphileyo okanye esiphelileyo osikhethileyo ikakhulu esixhomekeke kukhetho lomntu.
Inkqubo ye- iinwele ezingaphantsi lolunye ujongo oluqhelekileyo olubandakanya amacala amafutshane. Ngokungafaniyo nokuphela, i-undercut isikwe kakhulu phezulu entloko kunye nobude bonke, ingafuni kubuna. Nangona kunjalo, abafana banokucela i-barber yabo ukuba i-undercut fade ukuba banqwenela ukuba i-trim ephezulu idityaniswe.
Amacala amafutshane e-undercut enza kube lula ukudibanisa nenani leendlela ezahlukeneyo, kubandakanya ukubuyela umva, i-quiff, ipompadour, kunye nekama ngaphezulu. Ukungafaniyo bubuhle bokwenyani be-undercut, njengoko inokuba yeyodidi kunye nobunkunkqele okanye elula kwaye ekhawulezayo ngokuxhomekeke kwizinwele ofuna ukuziphumeza.
Naxa ukhula phantsi kwe-undercut, kuthatha ukukhululeka, ukubukeka okungcolileyo ukuba izitayile ngokugqibeleleyo zinomzamo omncinci. I-undercut yinwele yamadoda efuna isitayile kuyo yonke imiba yobomi babo. Idityanisiwe ngaphezulu, ibrashiwe umva, okanye yenziwa ngendlela ethile enesitayile, i-undercut ibonelela ngoluhlu lwezinto onokukhetha kuzo nawuphi na umntu onokuzixabisa.
iinwele eziphakamileyo neziqinileyo
I-quiff haircut isitayile esidala esivela kwii-1950s, kodwa ukuthatha okwangoku kujongeka kufanelekile kunangaphambili. I-quiff ibandakanya iinwele ezinde ngaphambili kwentloko, ethi ke ibhalwe ngendlela ebonakalayo yokuthambisa ngokuxubha iinwele phambili nangaphezulu, nokufaka imveliso. Xa ifakwe isitayile ngokufanelekileyo, i-quiff inokunxitywa kwimisitho esesikweni, amaqela okanye iofisi. Ukuba ishiywe ingafakwanga isitayile, iinwele ziya kudlula ziye phambili ebusweni, ezinokuthi kwakhona zenze ukubukeka okungaqhelekanga.
I-quiff ijongeka intle xa iphelile okanye iphantsi kwamacala, igxininisa ubude beenwele eziphakathi phezulu. Ngaphambi kokuba ubuze i-barber yakho ye-quiff, abafana baya kucetyiswa kakuhle ukuba bahlale bekhumbula ukuba ukujonga kufuna inani elifanelekileyo lesitayile.
Kulabo bakulungele ukubeka ixesha elincinci kunye nomzamo ntsasa nganye ukuze babonise isitayile esenziwe ngombala, ukujonga kufanelekile. Ukujongana neenwele ezinde ayinguye wonke umntu, kodwa ukuba ufuna i-retro ye-hairstyle yabasetyhini baya kuyithanda, i-quiff yeyona ndlela ilungileyo kuwe.
Ipompadour iyafana, kodwa inwele ezahlukileyo ngobuqhetseba kunesikhwama. Endaweni yokuxubha iinwele ngaphambili kwentloko, iinwele zomfana ziyaxukuxwa phezulu kwaye zibuye nemveliso ethile ukunika ubunjani bokujonga kunye nevolumu. Ngelixa i-quiff inokuba yinto encinci ukungcola kunye ne-spiky, ipompadour ibonakaliswa ngokugudileyo, nkqu nesilhouette yemilo echazwe ngakumbi. Umdibaniso ungongezwa ngokudibanisa iinwele ngaphambili kwipompadour yangoku ye-classic vs classic.
Umahluko ophambili phakathi kwepompadour kunye ne-quiff yenye yesitayile kunokuba bobona bude beenwele okanye imilo yokusikwa. Ke ukuba uneenwele ezinde ngaphambili, kuya kufuneka ubenako ukwenza isitayile sokutshixa kwakho kuzo zombini iipompadour kunye nesikhwama.
Ukubuza i-barber yakho ye-pompadour ye-haircut iya kukunika ubuninzi bezinto ezininzi. Ngapha koko, obu bude kunye nokuthungwa kweenwele kuya kukuvumela ukuba uthayiphe inani leentlobo ezahlukeneyo zeenwele.
Ukufumana ikama ngaphezulu kunokusetyenziselwa ukukhetha inwele ekruqulayo, ecocekileyo. Kodwa ikama lanamhlanje elingaphezulu linokuba nesitayile kunye nokuguquguquka. Kudityaniswe neenwele ezingasekhoyo emacaleni, i Ikama liphele isini ngakumbi kunakuqala. Abafana banokucela ukuba umchebi wabo achebe emgceni kwaye enze indawo enzima.
Njengothungelwano kunye nepompadour, i ikama ngaphezu kweenwele kubandakanya iinwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi ngaphezulu, kodwa ukugcinwa kunye nokuthambiswa kwemihla ngemihla kuncipha kakhulu. Faka nje inwele encinci okanye ipomade kwaye udibanise iinwele zakho ngqo ecaleni. Ukongeza ivolumu, qiniseka ukuba uphakamisa njengoko uhlamba ukuthintela ukubonakala okuthe tyaba.
Ukugcina ikama epokothweni kuya kukunceda ugcine le nwele ekuhambeni kwaye uhlale uhamba naphi na apho ukhoyo. Kwamanye amadoda, eyona ndlela ilula yeyona ilungileyo kwaye ikama yokucheba iinwele ngumzekelo wobo bulula bokuthopha.
Olunye ujongo lwakudala kodwa oluthandwayo, iinwele ezibuyisiweyo inokufezekiswa kubafana abaninzi ngeenxa zonke ii-intshi ezintathu zeenwele okanye nangaphezulu. Izinwele zitshintshelwe ngasemva kwentloko, kunye nezinye ubambe ngokuqinileyo, ukhanye phezulu pomade isetyenziswe ukugcina iinwele kwindawo. Isiphelo sisiphelo esibi, ukujonga okucocekileyo oya kukuthanda.
Uninzi lwexesha, akukho zinwele ezithile emacaleni ezifunekayo ukufezekisa isitayile esibuyileyo. Yonke into oyifunayo bubude obufanelekileyo beenwele phezulu kwaye uzokwazi ukufumana esi sitayile semvukelo. Nangona kunjalo, uninzi lwamadoda lukhetha ukubuyela umva ngenxa yokuba umahluko wenza ukubonakala kubonakale ngakumbi.
Njengenye yezona zinwele zishushu zamadoda kule minyaka ilishumi, ukukhetha ukubuyela umva yenye yeendlela abafana abanokuqinisekisa ukuba bajongeka babukhali kuwo nawuphi na umsitho.
Inkqubo ye- ifeksi kukucheba kweenwele okuqhelekileyo kwabafana abangafuni ukuba iinwele zabo zide, kodwa usafuna ukubonakala ulungile ngesitayile esipholileyo. Njengoko igama libonisa, i-fohawk ilingisa i-mohawk ngokuba necandelo elide leenwele ezibaleka phakathi kwentloko. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo ne-mohawk eyinyani, iinwele ze-faux hawk zihamba kunye nokuphelelwa endaweni amacala achetyiweyo . Ukujongwa ngokubanzi kukutsala ngamehlo ngaphandle kokungxola okanye ukubukisa njenge mohawk epheleleyo.
Le fade ye-hawk fade ilungile kwi-edgy, ukubukeka okumnandi okungafuneki kugcinwa kakhulu. Yonke into oyifunayo kukuthayipha i-faux hawk yipomade elungileyo okanye i-wax. Kwaye iinwele eziphakathi ubude ngaphezulu zinokuba ziisentimitha ezimbalwa ubude kunamacala aphelileyo, zikuvumela ukuba ubenakho ukwenza isitayile sekhama etyhidiweyo ngaphezulu okanye iinwele ezi-spiky.
Iyasebenza kwaye ilula, i i-buzz yamadoda isikiwe isenokuba yeyona ukunqunyulwa kweenwele eziphantsi iyafumaneka, ngaphandle kokucheba intloko yakho. Ukufumana oku kunqunyulwa kulula kodwa kobudoda, cela umchebi wakho ukuba asebenzise iziqhoboshi zeenwele kunye nokucheba ngokulinganayo zonke iinwele ezisentloko yakho kubude obulinganayo. Ukusika i-buzz emfutshane kakhulu, cela inombolo 1.
Abanye abantu abayithandi le ndlela ngenxa yobude bayo obufutshane ngokugqithisileyo, ngelixa abanye beyamkela ngenxa yokongezwa kokusebenza kweenwele ezimfutshane kakhulu. Olona ncedo luphambili lokufumana ukusikwa kwe-buzz kukuba ngekhe ufune ukwenza iinwele zakho kusasa. Ngelixa kuya kufuneka usike ngokufanelekileyo ngokuthe rhoqo, unokuzenzela ngokwakho ekhaya kunye neseti esemgangathweni yokuqhekeza.
ubude obuphakathi amadoda iinwele
I-Classic kunye neyenziwayo, abasebenzi banqunyulwa okwesibini kuphela kwi-buzz cut ngokwemfutshane. Ichazwe ngumva omfutshane kunye namacala aphelileyo, iinwele ezingaphezulu zishiyeke kancinci. Njenge iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo , ukubuza i-barber yakho yokusika abasebenzi kuya kukunika ukucoceka, isitayile somkhosi esingaze siphume kwifashoni.
Uninzi lweenwele entlokweni yakho ziya kuba ngaphantsi kwe-intshi enye ubude, oko kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba uzilungise iinwele zakho ukuze zibukeke zibumbene. Ukucheba kweenwele zamadoda yenye yezona zinto ziqhelekileyo, kwaye kukho isizathu soko. I-hairstyle iyancoma ngobuninzi bobuso bobuso kwaye kulula ukuyigcina, ngoko ke akukho sizathu sokuba ungayi.
Isityalo esiTyiweyo saseFransi
Inkqubo ye- Isityalo saseFrance , ekwabizwa ngokuba sisiqwengana sesityalo esenziwe ngombala, iyafana nokusikwa kweqela labasebenzi kodwa nangomphetho wongezwe ngaphambili. Ngelixa i-fringe inokudityaniswa kokubini okude kunye nokufutshane kweenwele ukubonakala okwahlukileyo, iinwele ezinqamlezileyo bezisoloko zomelele kulo nyaka.
Ukuba ujonge ukufumana iinwele zanamhlanje ezifunwayo kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela, isivuno esenziwe ngombala kufanelekile ukuzama! Mane ubuze umchebi wakho ngesivuno esifutshane ngesiphelo esiphakamileyo okanye esisezantsi. Ukugqiba isitayile, gcina iinwele zendalo nge-matte wax elula okanye ipomade.
Njengokwahluka kwekama ngaphezulu, i icala icala iinwele Isitayile esihle, esilula esibandakanya ukwahlula iinwele zakho zibe ngamacala amabini ngekama. Umgca wokwahlula kufuneka ubekwicala elinye lentloko, ngesiqhelo iinwele zakho ngokwendalo.
Ezinye izitayile zifuna ukwakheka okwahlukileyo kubuso ngokuxhomekeke kwicala othanda ukwahlula kulo, ke khangela ukuba yintoni ebonakala intle ngaphambili kwaye ubuze ingcebiso kuwe.
Izinwele ezicocekileyo ziyabuya. Nangona inokubuyisa iinkumbulo ze-90's, iinwele ze-spiky zime uvavanyo lwexesha kwaye zisenokwakha ukubukeka okuqhelekileyo namhlanje. Kodwa endaweni ye-clumped-ndawonye, ​​i-gelled spikes zezizukulwana ezidlulileyo, iinwele zanamhlanje ezinamakhwiniba zimalunga nokubhalwa kunye nokudakumba kokugqitywa kwendalo ngakumbi. Obu bugcisa ekugqibeleni bunikezela ngenkangeleko ephucukileyo.
Ngokufaka i-wax encinci kunye nokujija iinwele zakho phezulu, i-spikes ziya kuqala ukuvela. Isitayile sinokusetyenziselwa ezona zinwele zifutshane zimalunga nee-intshi ezimbini ubude. Ukongeza ii-spikes kunika i-hairstyle ubunjani obukhangeleka buhle kwaye bungazami.
Inkqubo ye- indaoda elungile Ibe yenye yeenwele ezithandwa kakhulu emadodeni kule minyaka idlulileyo. Kubafana abaneenwele ezinde, isitayile kulula ukwenza ngentambo yeenwele. Konke oku kubandakanya ukutsala iinwele zakho kwakhona kwi-bun kwaye uzidibanise endaweni yazo.
Ukulula kokubopha zonke iinwele zakho zibuyele kwi-bun yindlela elula yokuzikhupha zisebenze okanye ezemidlalo. Ngelixa abantu babonakala bohlulekile phezu kwentloko ye-bun man, sithi ukuba ungayikhupha, yiya kuyo.
Njengebhan yendoda, iqhina eliphezulu likwabandakanya ukudibanisa neenwele zakho. Umahluko ophambili konke malunga nokubekwa. Iqhina elingaphezulu libotshelelwe phezulu entlokweni, ngelixa ibhanti yendoda isondele kwisithsaba okanye ngasemva.
Ngapha koko, omnye umahluko oqhelekileyo kukuba abafana abaneenwele zeenwele eziphezulu babonakala bekhetha ukucheba iinwele emacaleni. Ukuba uneenwele ezinde kwaye ufuna ukuzama into eyahlukileyo, iqhina eliphezulu lutshintsho olulula lwesitayile esifezekisa imbonakalo yehipster.
Indlela yokucela ukucheba iinwele
Ukwazi amagama eenwele onqwenela ukuzizama kunokukunceda ukuba usikwe okona kulungileyo qho xa undwendwela indawo yokucheba iinwele. Kodwa ngelixa kubalulekile ukukhumbula imiqathango yokucheba iinwele xa uthetha nomchebi wakho, nazi ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni xa usika iinwele zakho.
Yiba neenwele engqondweni xa undwendwele i-barber yakho.
Khetha phakathi kokuphela okanye ukuhamba ngaphantsi emacaleni.
Ukuba ufuna ukuphela, yazi ukuba iphakamileyo okanye iphantsi kangakanani kwaye yeyiphi ubukhulu beclipper okanye inqanaba.
Ukuba uceba ukwenza iinwele zakho ngaphezulu ngendlela ethile, xelela iinwele zakho kwangaphambili. Ngokusekwe kubume bobuso bakho, ukuthungwa kweenwele, kunye nobude obukhoyo ngoku, unokwenza izindululo.
Thatha isigqibo malunga nendlela ofuna ukuba ngayo i-neckline yakho isikwe.
Ukuphola kweenwele zamadoda amatsha ukuzama
Kuba inwele nganye iza nokwahluka okuninzi kwaye abafana banokuhlala befumana iindlela zokwenza naluphi na usiko, nazi ezinye izimvo kunye nokhetho onokulujonga. Apha ngezantsi, jonga igalari yethu yeenwele ezipholileyo zokucheba iinwele zamadoda ukuzama kulo nyaka!
Isicatshulwa seTrafti yala maxesha + yokuPhela okuPhantsi + kulayini ophezulu
Ukuqhawulwa kwe-Undercut + engaxhunyiwe kwi-Textured Brush Up
I-Razor High Fade + Imilo ePhakamileyo + yeenwele eziQinisekisiweyo
Ukuqhuma kweFade Mohawk + iindevu
I-Mid Drop Fade + i-Edge Up + ye-Messy ephezulu ephezulu
Ukulahla okuPhakamileyo + kweMigca emi-3 yoyilo + lweenwele ezimfutshane
Ukuphakama okuphezulu kweBald + Line Up + Uyilo loMnqamlezo
Ikama Ngaphezulu kokuphela + kweCandelo eliLukhuni + kuMgca oPhezulu + kwiindevu
I-Natural Slick Back Undercut
Mid Fade + Long Fringe + iindevu
Iinwele ezijiyileyo eziPhezulu + Phezulu koLusu luphele + iindevu ezipheleleyo
Amacala achetyiweyo + Quiff Quiff + Beard
amadoda amnyama iinwele kunye nenxalenye
indlela yokufumana inyanga yam kunye nophawu oluphumayo
ukucheba iinwele ezigobileyo